Shiinaha Taper Roller bear (Metric) saarayaasha iyo alaableyda | Dhalinta JITO
Gawaarida Hub Wheel Hub
Dhalista Roll Cylindrical
Taabashada biraha rullaluistemadka (metrik)
Wareegyada duuban ee duuban ayaa ah saa'ido kala duwan, iyo giraanyada gudaha iyo dibaddaba ee xargaha ayaa leh marinnada tartanka. Noocan qaadashadu waxay u qaybsan tahay noocyo qaabdhismeedyo kala duwan sida hal saf oo isku xigta, laba saf oo isku xigta iyo afarta isku xigta ee shaashadda duubista leh oo ku xidhan tirada safafka rollers ee la rakibay
Shayga No. 32218
Nooca dhalista Taabashada biraha rullaluistemadka (metrik)
Noocyada shaabad Furan, 2RS
Waxyaabaha Birta Chrome GCr15
Sax P0, P2, P5, P6, P4
Nadiifinta C0, C2, C3, C4, C5
Cabbirka dhalista dhexroorka gudaha 0-200mm, dhexroorka banaanka 0-400mm
Nooca qafis Naxaas, bir, nylon, iwm
Feature Ball saa'idka Cimri dheer oo tayo sare leh
Sawaxan hoose oo si adag u kontaroolaya tayada JITO dhalista
Culays sare oo ay soo saartay naqshadda farsamada sare
Qiimaha tartanka, kaas oo leh kan ugu qiimaha badan
Adeegga OEM ayaa la bixiyaa, si loo daboolo shuruudaha macaamiisha
Codsiga Baabuurta, warshadaha soo roga, macdanta, metallurgy, mashiinada caaga ah iyo warshadaha kale
Xirmo Xambaarsan Sariirtaada, kiiska alwaax, baakadaha ganacsiga ama sida looga baahan yahay macaamiisha
Baakado & Gaarsiin:
Faahfaahinta Baakadaha Xirxirida dhoofinta caadiga ah ama waafaqsan shuruudaha macaamilka
Nooca Xirmada: A. Tuubooyinka balaastigga ah Xidhmo + Kartoon + Sariirta alwaax
B. Khariidadda Roll + Kartoonka + Khaanadda looxa
C. Sanduuqa Shaqsiga + Bacda caaga ah + Kartoon + Sariirta looxa
Tirada (Cadad) 1 - 100 100
Est. Waqti (maalmo) 2 In lagu gorgortamo
Hordhac Dhalista Dhalinta
Wareegyada duuban ee duuban ayaa ah saa'ido kala duwan, iyo giraanyada gudaha iyo dibaddaba ee xargaha ayaa leh marinnada tartanka. Noocan qaadashadu waxay u qaybsan tahay noocyo qaabdhismeedyo kala duwan sida hal saf oo isku xigta, laba saf oo isku xigta iyo afarta isku xigta ee shaashadda duubista leh oo ku xidhan tirada safafka rollers ee la rakibay Safafka kaliya ee mashiinka duubista ah ayaa u adkeysan kara culeyska radial iyo culeyska foorari ee hal jiho. Marka culeyska la saarayo culeys shucaac ah, qayb ka mid ah axial ayaa la soo saari doonaa, sidaas darteed dhal kale oo u adkeysan kara xoogga axial jihada ka soo horjeedka ayaa loo baahan yahay si loo dheellitiro.
Codsiga Sita Rullaluistemadka Taper
Wareegyada duuban ee duubku badanaa waa nooc gaar ah, taas oo ah, isku soo wada duub giraanta gudaha oo ka kooban giraan gudaha ah oo leh duub iyo isku xirnaanta qafis ayaa si gooni ah loogu dhejin karaa baalka dibadda (giraanta dibadda). Wareegyada duubista duuban ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa gawaarida, mashiinnada rogrogmada, macdanta, metallurgy, mashiinnada caagga ah iyo warshadaha kale.
Qaadista duubista duuban Qeexitaanka Suufiyada
J: Isbedelka qaabdhismeedka gudaha
B: kororka xagasha xiriirka
X: Qiyaasaha dibedda waxay waafaqsan yihiin heerarka caalamiga ah.
CD: Giraanta dibedda laba jeer leh godka saliidda ama jeexitaanka saliidda.
TD: Giraan labalaab gudaha ah oo leh ceel duuban.
Laxiriira 30300 Taxane Taabbeyaal Bearings Catalog
Qiimeynta culeyska aasaasiga ah
Haddii intaa ka badan, fadlan guji degelkeenna www.jito.cc
- Bilowga, waxaan xiriir la yeelan doonnaa macaamiisheenna dalabkooda, ka dib injineeradeennu waxay ka shaqeyn doonaan xalka ugu habboon ee ku saleysan baahida macaamiisha iyo xaaladdooda.
KONTOROOLKA TAYO (Q / C)
- Iyadoo la raacayo heerarka ISO, waxaan leenahay shaqaale Q / C xirfadle ah, qalabka baaritaanka saxda ah iyo nidaamka kormeerka gudaha, xakamaynta tayada ayaa lagu hirgeliyaa nidaam kasta oo ka yimaada alaabada la helo illaa baakadaha alaabada si loo hubiyo tayada sicirka.
- Qalabka wax lagu rakibo ee dhoofinta iyo jawiga deegaanka lagu ilaaliyo ayaa loo isticmaalaa jihadayada, sanduuqyada caadiga ah, sumadaha, xargaha iwm ayaa sidoo kale lagu bixin karaa iyada oo loo eegayo codsigeenna macaamilka.
- Caadi ahaan, jiheyntayada ayaa macaamiisha loogu diri doonaa gaadiidka badda sababo la xiriira culeyskiisa culus, hawo-la’aanta, Express sidoo kale waa la heli karaa haddii macaamiisheennu u baahdaan.
- Waxaan u dammaanad qaadeynaa jiheyntayadu inay ka xoroobaan cilladaha qalabka iyo shaqada muddo 12 bilood ah laga soo bilaabo taariikhda dhoofinta, dammaanad-qaadkan waxaa baabi'iyay adeegsi aan lagu talin, rakibo aan habboonayn ama waxyeelo jireed.
S: Waa maxay adeeggaaga iibka kadib iyo dammaanaddaada?
A: Waxaan ballanqaadeynaa inaan qaadno mas'uuliyadda soo socota marka la helo badeecad cilladaysan:
1.12 bilood oo damaanad ah laga bilaabo maalinta ugu horreysa ee alaabta la helo;
Beddelada waxaa loo diri doonaa badeecada amarkaaga xiga;
Soo-celinta alaabada cilladaysan haddii macaamiisha ay u baahdaan.
S: Miyaad aqbashaa amarrada ODM & OEM?
J: Haa, waxaan siinnaa adeegyo ODM & OEM macaamiisha adduunka oo dhan, waxaan awood u leenahay inaan u habeynno guryo qaabab kala duwan ah, iyo cabbirka noocyo kala duwan, waxaan sidoo kale u habeynnaa guddiga wareegga & sanduuqa baakadaha sida ku xusan shuruudahaaga.
J: MOQ waa 10pcs oo loogu talagalay alaabooyinka caadiga ah; ee loogu talagalay alaabada la habeeyay, MOQ waa in horay looga wada xaajoodaa. Ma jiro MOQ amarrada muunadda.
S: Muddo intee le'eg ayey tahay waqtiga hoggaanka?
J: Waqtiga hogaaminta ee amarrada muunadda waa 3-5 maalmood, amarrada badanna waa 5-15 maalmood.
S: Sidee loo dhigaa amarrada?
J: 1. Noo soo dir email noo ah nooca, sumadda iyo tirada, macluumaadka wakiilka, habka dhoofinta iyo shuruudaha lacag bixinta;
Qaan-sheegashada Proforma ee la sameeyay oo laguu soo diray;
3. Lacag bixinta oo dhameystiran kadib xaqiijinta PI;
4.Hooji Bixinta oo diyaarso wax soo saar.
Hore: Dhalista Roll Cylindrical
Xiga: Dhalista giraanta taabashada (inji)
Qaadista Roller Cajalad
Qaadista Rullaluistemadka Tawreed Hal Row
Qaadista Rullaluistemadka Double Taper
Qaadista duubista duuban
Dhalista Giraangirta Rullaluistemadka Taabaneeysan
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida 43200-50Y02
Sax High Wheel Hub dhalista Automotive Fr ...
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida 40210-VW000
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida 43202-AX400
Cinwaanka: Sax warshad park warshadaha, degmada Guantao, gobolka Hebei
Telefoonka: + 86-635-8550888
Telefoonka gacanta: + 86-15865730123